Minisiteran'ny aterineto - Ny Fiangonan'i Kristy ... Iza ireo olona ireo?
Ny Fiangonan'i Kristy ... Iza ireo olona ireo?
Nataon'i Joe R. Barnett
Azo inoana fa efa nandre ny fiangonan'i Kristy ianao. Ary angamba nanontany ianao hoe: "Iza ireo olona ireo? Inona - raha misy - no mampiavaka azy ireo amin'ireo fiangonana an-jatony maro eto amin'izao tontolo izao?
Mety efa nanontany tena ianao hoe:
"Inona ny fototra niaingan'izy ireo?"
"Firy ny isan'ny mpikambana ananany?"
"Inona ny hafatr'izy ireo?"
"Ahoana no itondrana azy ireo?"
"Ahoana no ivavahany?"
"Inona no inoan'izy ireo momba ny Baiboly?
Manerana an'izao tontolo izao dia misy fiangonana 20,000 ao amin'ny fiangonan'i Kristy miaraka amin'ny 21 / 2 ho an'ny mpikambana tsirairay 3 tapitrisa. Misy fiangonana vitsivitsy, ahitana mpikambana vitsivitsy monja - ary ireo olona lehibe izay ahitana mpikambana an'arivony.
Ny fifantohana lehibe indrindra amin'ny hery anaty ao amin'ireo fiangonan'i Kristy dia any amin'ny faritra atsimon'i Etazonia izay misy ohatra momba ny mpikambana 40,000 ao amin'ny fiangonana 135 sasany ao Nashville, Tennessee. Na, any Dallas, Texas, misy mpikambana 36,000 eo anivon'ny kongregasiona 69. Any amin'ireo firenena toy ny Tennessee, Texas, Oklahoma, Alabama, Kentucky - ary ny hafa - misy ny fiangonan'i Kristy ao amin'ny tanàna tsirairay, na kely na lehibe.
Na dia tsy be loatra aza ny isan'ny kôngregasiôna sy mpikambana ao amin'ny toerana hafa, dia misy ny fiangonan'i Kristy any amin'ny fanjakana any Etazonia sy any amin'ny firenen-kafa 109.
Olon'ny Fanarenana ny Fanahy
Ny mpikambana ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia vahoaka miorina amin'ny fanarenana indray - te-hamerina amin'ny laoniny amin'izao fotoana izao ny fiangonana vaovaon'ny Testamenta Vaovao.
Dr. Hans Kung, teolojiana Eoropeana malaza, namoaka boky taona vitsivitsy lasa izay mitondra ny lohateny hoe The Church. Nitaraina i Dr. Kung fa efa very ny fiangonana niorina; dia nanjary navesatra tamin'ny fomban-drazana; dia tsy nahatanteraka izay nanantenan'i Kristy azy io.
Ny valiny tokana, araka ny Dr. Kung, dia tokony hiverina any amin'ny soratra masina mba hahitana ny fiangonana tany am-piandohana, ary avy eo dia hiverina amin'ny taonjato faharoapolo ny maha-zava-dehibe ny fiangonana tany am-piandohana. Izany no tadiavin'ny fiangonan'i Kristy.
Tamin'ny tapany farany tamin'ny taonjato faha 18 dia nanomboka nanontany ny lehilahy samy hafa an-tsitrapo, niara-nianatra tsy miankina, tany amin'ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao:
- Nahoana no tsy miverina ankoatry ny fiangonana eo amin'ny fiangonana ny tsotra sy ny fahadiovan'ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany?
-Raha tsy mandray ny Baiboly irery ary manohy ny "fampiorenana tsy tapaka amin'ny fampianarana apostoly" (Asa 2: 42)?
-Nahoana isika tsy manambana voa (ny Tenin'Andriamanitra, Lioka 8: 11), izay nambolen'ireo kristiana tamin'ny taonjato voalohany, ary ho kristiana ihany, tahaka ny ahoana?
Niangavy ny rehetra izy ireo mba handroaka ny antokom-pinoana, hanesorana ny fanekentsika olombelona ary hanaraka ny Baiboly ihany.
Nampianatra izy ireo fa tsy misy tokony takiana amin'ny olona ho asa fanehoana finoana afa-tsy izay hita ao amin'ny soratra masina.
Nanantitrantitra izy ireo fa ny famerenana hiverina amin'ny Baiboly dia tsy midika ho fananganana fiangonana iray hafa fa fiverenana amin'ny fiangonana tany am-piandohana.
Ny mpikambana ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia mafana fo amin'ity fomba fiasa ity. Ny Baiboly ihany no mpitari-dalana anay dia mikatsaka ny hahitana ny fiangonana tany am-piandohana ary ny famerenana azy marina.
Tsy mahita izany isika ho fiavonavonana, fa ny mifanohitra amin'izany. Mamonjy isika fa tsy manana zo hangataka ny fankatoavana ny lehilahy amin'ny fikambanan'olombelona isika - fa ny zo fotsiny hiantso ny lehilahy hanaraka ny rafitr'Andriamanitra.
Tsy misy fiheverana
Noho izany antony izany dia tsy mahaliana antsika ny fanekem-pinoana nataon'olombelona, ​​fa amin'ny fomba tsotra fotsiny ao amin'ny Testamenta Vaovao. Tsy mieritreritra ny tenantsika ho fiangonana isika - na Katolika, Protestanta na Jiosy - fa amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny fiangonana izay napetrak'i Jesoa ary noho izany no nahafatesany.
Ary izany, raha ny marina dia, no mahatonga antsika hitafy ny anarany. Ny teny hoe "fiangonan'i Kristy" dia tsy ampiasaina ho anaram-piangonana, fa amin'ny teny famaritana milaza fa ny fiangonana dia an'i Kristy.
Fantatsika ny fahadisoantsika sy ny fahalemen'ny tenantsika manokana - ary izany no antony lehibe indrindra haniriana ny hanaraka amim-pitandremana ny drafitra feno sy ampy tanteraka an'Andriamanitra ho an'ny fiangonana.
Firaisan-tsaina miorina amin'ny Baiboly
Satria Andriamanitra dia nanome ny "fahefana rehetra" ao amin'i Kristy (Matio 28: 18), ary satria izy dia mpitondra tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao (Hebreo 1: 1,2), dia mino isika fa i Kristy irery ihany no manana fahefana hiteny hoe inona ny fiangonana ary inona Tokony hampianatra isika.
Ary satria ny Testamenta Vaovao ihany no manambara ny torolalan'i Kristy amin'ny mpianany, dia izy irery no fototry ny fampianaran'ny fivavahana sy ny fampiharana rehetra. Izany dia manan-danja amin'ny mpikambana ao amin'ny fiangonan'i Kristy. Mino isika fa ny fampianarana ny Testamenta Vaovao tsy misy fanovàna no hany fomba hitarihana ny lehilahy sy ny vehivavy ho lasa Kristiana.
Mino izahay fa ny fizarana ara-pivavahana dia ratsy. Nivavaka ho an'ny firaisana i Jesoa (Jaona 17). Ary taty aoriana dia niangavy ireo izay nizara ny firaisana amin'i Kristy (1 Corinthians 1) ny apostoly Paoly.
Mino izahay fa ny fomba tokana hanatanterahana ny firaisana dia ny fiverenana any amin'ny Baiboly. Ny fifanekena dia tsy afaka mitondra firaisana. Ary azo antoka fa tsy misy olona, ​​na vondron'olona, ​​manan-jo hanangana fitsipika maromaro izay tsy maintsy hitoeran'ny tsirairay. Saingy tsara ny milaza hoe "Andao isika hiray hina amin'ny fanarahana ny Baiboly fotsiny." Marina izany. Azo antoka izany. Marina izany.
Ny fiangonana ao amin'i Kristy dia mitaky ny firaisan-kina ara-pivavahana mifototra amin'ny Baiboly. Mino isika fa ny fanekena ny fitambaram-pinoana hafa ankoatra ny Testamenta Vaovao, ny mandà tsy hankatò ny baikon'ny Testamenta Vaovao, na ny hanaraka izay fomba rehetra tsy notanterahin'ny Testamenta Vaovao dia manampy na manalavitra ny fampianaran'Andriamanitra. Ary samy novelomina ao amin'ny Baiboly ny fanampiana sy ny fanavakavahana (Galatiana 1: 6-9; Apokalypsy 22: 18,19).
Izany no antony mahatonga ny Testamenta Vaovao ny hany fitsipi-pinoana sy fampiharana ananantsika ao amin'ny fiangonan'i Kristy.
Samy nitantana ny fiangonana tsirairay
Ny fiangonan'i Kristy dia tsy misy ny fandikana ny biraon'ny rafitra maoderina. Tsy misy birao governemanta - na distrika, faritra, firenena na iraisam-pirenena - tsy misy foibe eto an-tany ary tsy misy rafitra noforonin'olombelona.
Ny fiangonana tsirairay dia mahaleotena (mifehy tena) ary tsy miankina amin'ny fiangonana hafa. Ny fatorana tokana izay mamatotra ny fiangonana maro dia fifamatorana iombonana amin'i Kristy sy ny Baiboly.
Tsy misy fivoriambe, fivoriana isan-taona, ary boky aman-gazety ofisialy. Ny fiangonana dia miara-miasa amin'ny fanohanana ny tranon'ireo ankizy, trano ho an'ny zokiolona, ​​asa fitoriana, sns. Na izany aza, ny fandraisana anjara dia tsy maintsy atao an-tsitrapo ao amin'ny kongregasiona tsirairay ary tsy misy olona na antokon'olom-panontaniana na fanapahan-kevitra ho an'ny fiangonana hafa.
Ny fiangonana tsirairay dia mifehy eo an-toerana amin'ny alalan'ireo loholona maromaro nofantenana avy amin'ny mpikambana. Ireo dia lehilahy izay mihaona ny fepetra manokana ho an'ity birao ity omena ao amin'ny 1 Timothy 3 sy Titus 1.
Misy koa diakona ao amin'ny fiangonana tsirairay. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra ara-baiboly ao amin'ny 1 Timothy 3 ireo. I
Ny fiankohofana ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia mifantoka amin'ny zavatra dimy, mitovy amin'ny an'ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany. Mino izahay fa zava-dehibe ny lamina. Hoy Jesosy: "Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana" (Jaona 4: 24). Avy amin'io fanambarana io no ianarantsika zavatra telo:
1) Ny adidintsika dia tokony hibaiko ny zavatra tsara ... Andriamanitra;
2) Tsy maintsy manosika azy ny toe-tsaina tsara;
3) Tsy maintsy araka ny marina izany.
Ny mivavaka amin'Andriamanitra araka ny fahamarinana dia ny manompo azy araka ny Teniny, satria ny Teniny dia fahamarinana (Jaona 17: 17). Noho izany, tsy tokony hanaisotra ny zavatra hita ao amin'ny Teniny isika, ary tsy tokony hampiditra izay zavatra tsy hita ao amin'ny Teniny.
Amin'ny raharaham-pivavahana dia tokony handeha amin'ny finoana isika (2 Corinthians 5: 7). Satria ny finoana dia avy amin'ny fihainoana ny Tenin'Andriamanitra (Romana 10: 17), ny zavatra rehetra tsy nahazoan-dalana avy amin'ny Baiboly dia tsy azo atao amin'ny finoana ... ary izay tsy avy amin'ny finoana dia ota (Romana 14: 23).
Ireo zavatra dimy nivavahan'ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany dia nihira, nivavaka, nitory, nanolotra ary nisakafo ny Sakafo Harivan'ny Tompo.
Raha mahafantatra ny fiangonan'i Kristy ianao dia mety mahafantatra fa amin'ny lafiny roa ireo zavatra ataontsika dia tsy mitovy amin'ny an'ny ankamaroan'ny fivavahana. Noho izany, avelao aho hifantoka amin'ireto roa ireto, ary ambarao ny antony mahatonga anay.
Ny iray amin'ireo zavatra mahamarika matetika ny fiangonan'i Kristy dia ny mihira tsy mampiasa fitaovana mozika mozika - ny hira cappella no hany mozika ampiasaina amin'ny fivavahantsika.
Raha lazaina tsotra izao, dia izao no antony: mikatsaka ny hivavaka araka ny torolalan'ny Testamenta Vaovao isika. Ny Testamenta Vaovao dia mandao mozika fitaovana, noho izany dia mino izahay fa marina izany ary azo antoka ny hamela izany koa. Raha nampiasa ilay fitaovana mekanika isika dia tokony hanao izany raha tsy misy ny Testamenta Vaovao.
Ireo andininy 8 ao amin'ny Testamenta Vaovao ihany no misy ny mozika amin'ny fivavahana. Ireto ny:
"Ary rehefa nihira fiderana izy, dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva" (Matio 26: 30).
"Ary nony mamatonalina, dia nivavaka sy nihira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy." (Asan'ny Apostoly 16: 25).
"Koa hidera Anao any amin'ny Jentilisa aho ary hankalazako ny anaranao" (Romanina 15: 9).
"... hihira amin'ny fanahy aho ary hihira amin'ny saina koa" (1 Corinthians 14: 15).
"... dia heniky ny Fanahy ny fifampiarahabana amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny hira ara-panahy, mihira sy mampihira ny Tompo amin'ny fonao manontolo" (Efesiana 5: 18,19).
"Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo, tahaka ny ampianaranareo sy hifanara-tsaina amin'ny fahendrena rehetra ary amin'ny fihiranareo ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy mbamin'ny fisaorana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra" (Kolosiana 3: 16).
"Hanambara ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo afovoan'ny fiangonana no hiderako Anao" (Hebreo 2: 12).
"Misy aminareo va, raha misy mijaly, ka avelao izy hiara-mivavaka." (Jakoba 5: 13).
Ny mozika mozika mozika dia tena tsy hita ao amin'ireo andalana ireo.
Tamin'ny taon-jato faharoapolo taorinan'ny taona dia nisy ny mozika an-jatony tamin'ny fivavahan'ny fiangonana, ary tsy nisy ny fampiharana izany hatramin'ny taonjato fahavalo.
Ny mozika instrumental dia nanohitra mafy ireo mpitondra fivavahana toy ny an'i John Calvin, John Wesley sy Charles Spurgeon noho ny tsy fisian'ny Testamenta Vaovao.
Ny fitandremana isan-kerinandro ny Fanasan'ny Tompo
Ny toerana hafa izay mety nahatsikaritra ny maha-samihafa ny fiangonana an'i Kristy sy ireo antokom-pivavahana hafa dia ao anatin'ny Fanasan'ny Tompo. Io fotoam-pahatsiarovana io dia natolotr'i Jesoa tamin'ny alin'ny famadihany (Matio 26: 26-28). Voamarin'ny kristianina ho fahatsiarovana ny fahafatesan'ny Tompo (1 Corinthians 11: 24,25). Ireo marika - mofo tsy misy lalivay sy voankazo - no maneho ny vatana sy ny ran'i Jesosy (1 Corinthians 10: 16).
Ny Fiangonan'i Kristy dia samihafa amin'ny olona maro rehefa mitandrina ny Fanasan'ny Tompo amin'ny andro voalohan'ny herinandro. Averina indray fa ny antony atrehantsika dia tapa-kevitra ny hanaraka ny fampianaran'ny Testamenta Vaovao. Milaza momba ny fampiharana ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany izy io: "Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia niara-niasa tamin'ny mpianatra izy." (Asa 20: 7).
Ny sasany dia nanohitra fa ny lahatsoratra dia tsy manondro ny andro voalohan'ny herinandro. Marina izany - tahaka ny baiko hitandrina ny Sabata dia tsy manondro ny Sabata rehetra. Ny baiko dia tsotra fotsiny, "tsarovy ny andro Sabata hanamasinana azy" (Eksodosy 20: 8). Fantatry ny Jiosy fa midika hoe isaky ny Sabata. Toy ny hoe ny "andro voalohany amin'ny herinandro" dia midika hoe andro voalohany amin'ny herinandro.
Fantatray avy amin'ireo mpahay tantara hajaina toa an-dry Neander sy Eusebius fa ireo Kristiana tamin'izany taona izany dia nitondra ny Fanasan'ny Tompo isaky ny Alahady.
Angamba manontany tena ianao hoe: "Ahoana no maha-mpikambana ao amin'ny fiangonan'i Kristy?" Inona avy ireo fepetra maha-mpikambana?
Ny Fiangonan'i Kristy dia tsy miresaka momba ny maha-mpikambana azy raha resaka fehezan-dalàna izay tsy maintsy arahina amin'ny fankatoavana an-tsoratra ao amin'ny fiangonana. Ny Testamenta Vaovao dia manome dingana sasantsasany izay noraisin'ny olona tamin'io andro io ho lasa Kristianina. Rehefa lasa Kristianina ny olona iray, dia lasa mpikambana ao amin'ny fiangonana izy.
Toy izany koa ny fiangonan'i Kristy ankehitriny. Tsy misy fitsipika na fombafomba maromaro samihafa izay tsy maintsy arahina mba hampidirana ao am-piangonana. Rehefa lasa Kristianina ny tenany, dia lasa mpikambana ao amin'ny fiangonana izy. Tsy misy fepetra fanampiny takiana mba hahazoana ny maha-mpikambana azy ao amin'ny fiangonana.
Tamin'ny andro voalohandohan'ny fiangonana, ireo izay nibebaka sy natao batisa dia voavonjy (Asa 2: 38). Ary nanomboka tamin'io andro io dia nanampy ny fiangonana rehetra ireo izay voavonjy (Asa 2: 47). Araka io andininy io (Asa 2: 47) dia Andriamanitra no nampiana. Noho izany, raha mikatsaka ny hanaraka an'io lamina io isika, dia tsy mifidy olona ao amin'ny fiangonana na manery azy ireo amin'ny alalan'ny andian-dahatsoratra tsy maintsy arahintsika. Tsy manan-jo hitaky zavatra mihoatra ny fanekeny fankatoavana ny Mpamonjy isika.
Ny fepetra famelana izay ampianarina ao amin'ny Testamenta Vaovao dia:
1) Tsy maintsy mandre ny filazantsara ny olona, ​​satria "ny finoana dia avy amin'ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra" (Romanina 10: 17).
2) Tsy maintsy mino ny olona, ​​satria "raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy afaka hampifaly an'Andriamanitra" (Hebreo 11: 6).
3) Tokony hibebaka amin'ny fahotantsika taloha ny olona iray satria Andriamanitra dia "mandidy ny olon-drehetra, na aiza na aiza hibebaka" (Asa 17: 30).
4) Ny olona dia tsy maintsy manaiky an'i Jesosy ho Tompo, satria hoy izy: "Izay manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, ​​dia izy koa no hekeko koa eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra" (Matio 10: 32).
Ary ny olona iray dia tsy maintsy atao batisa ho famelana ny fahotana, satria hoy i Petera hoe: "Mibebaha, ary aoka hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy-Kristy ny iray aminareo amin'ny famelana ny helokareo ..." (Asa 5: 2) .
Antitranterina momba ny Batemy
Ny Fiangonan'i Kristy dia manana laza tsara amin'ny fametrahana adin-tsaina be momba ny ilana ny batisa. Na izany aza, tsy manantitrantitra ny batisa isika ho toy ny "ôrdônansin'ny fiangonana", fa amin'ny maha-baikon'i Kristy antsika. Ny Testamenta Vaovao dia mampianatra ny batisa ho toy ny fihetsika izay ilaina amin'ny famonjena (Marka 16: 16; Asan'ny Apostoly 2: 38; Asa 22: 16).
Tsy manao batisa ny zazakely isika satria ny Batemy ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ho an'ny mpanota ihany izay mitodika amin'ny Tompo amin'ny finoana sy ny fivalozana. Ny zazakely dia tsy manana ota hibebahana, ary tsy afaka ny ho mpino.
Ny endrin'ny batisa tokana izay ataontsika ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia ny fanitrihana. Ny teny grika izay avy amin'ny hoe batistera dia midika hoe "manatsoboka, manidintsidina, misaraka, manidina." Ary ny Soratra Masina dia manondro mandrakariva ny batisa ho fandevenana (Asa 8: 35-39; Romana 6: 3,4; Kolosiana 2: 12).
Ny batisa dia zava-dehibe tokoa satria ny Testamenta Vaovao dia mametraka ireto tanjona manaraka ireto:
1) Miditra ao amin'ny fanjakana (John 3: 5).
2) Ny fifandraisana amin'ny ran'i Kristy (Romana 6: 3,4).
3) Ny miditra ao amin'i Kristy (Galatiana 3: 27).
4) Ho an'ny famonjena (Marka 16: 16; 1 Peter 3: 21).
5) Ho an'ny famelana ny fahotana (Asa 2: 38).
6) Manadio ny fahotana (Asa 22: 16).
7) Izany dia miditra ao amin'ny fiangonana (1 Corinthians 12: 13; Efesiana 1: 23).
Satria i Kristy dia maty noho ny fahotan'izao tontolo izao ary ny fanasana hizara amin'ny fahasoavany dia manokatra ho an'ny olon-drehetra (Asa 10: 34,35; Apokalypsy 22: 17), tsy mino isika fa misy olona voatendry ho amin'ny famonjena na fanamelohana. Ny sasany dia hisafidy ny hanatona an'i Kristy amin'ny finoana sy ny fankatoavana ary ho voavonjy. Ny hafa dia handà ny fitalahoany ary hohelohina (Marka 16: 16). Ireo dia tsy ho very noho ny fanamarihana azy ireo ho fanamelohana, fa satria izany no lalana nofidiany.
Na aiza na aiza misy anareo amin'izao fotoana izao, dia manantena izahay fa hanapa-kevitra ny hanaiky ny famonjena nomen'i Kristy ianao - fa hanolotra anao amin'ny finoana mankatò ianao ary ho lasa mpikambana ao amin'ny fiangonany.